WhatsApp dia hamela anay hisintona kopian'ny angon-drakitra | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia hamela antsika hisintona kopian'ny angon-drakitra
Tsy azo lavina fa ny zava-nitranga tamin'ny 25 Mey dia nahatonga ny orinasan-teknolojia hiasa tsy an-kijanona sy hanao fanovana ho mangarahara kokoa raha ny fanangonana data. Ny lalàna vaovao momba ny fiarovana angona dia mety handoa vola amin'ireo orinasa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika vaovao. Y WhatsApp dia efa vonona ho amin'izany miaraka amin'ireo fanovana nambarany. Fa ny tena zava-dehibe dia: afaka mangataka kopian'ny angon-drakitrao vetivety ianao.
Ao amin'ny bilaoginao manokana WhatsApp, nanambara ilay orinasa fa manao fanovana izy ary manantitrantitra indray fa ny angon-drakitra rehetra dia voahita miafina hatrany ary tsy afaka mamaky na mihaino ny resaka ifanaovanao akory izy ireo. Toy izany koa, nanazava izy ireo fa tsy mizara ny angon-drakitrao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa na hahazoana doka amin'ny Facebook. Mikasa ny hiara-hiasa amin'ireo orinasa Facebook marobe izy ireo, saingy ho tonga tsy ho ela sy amin'ny antsipirihany be ny vaovao. Na izany aza, ny tena mahaliana anay indrindra dia ny mety hangataka ny fisintomana ny angon-drakitrao rehetra.
Ny orinasa dia miantoka fa amin'ny herinandro ho avy dia hanana fitaovana vaovao amin'ny fikirakirana WhatsApp izahay ary ho azon'ny mpampiasa rehetra manerantany izany. Mazava ho azy, izy rehetra dia mila manana ny kinova farany amin'ny serivisy fandefasana hafatra eo noho eo. Toy izany koa hahatratra ny mpampiasa Android sy ny iOS izany.
Ahoana no ahafahanao misintona ny angon-drakitrao rehetra? Tsy maintsy mandeha any amin'ny "Settings" ianao ary mankanesa any amin'ny faritra "Account". Avy eo dia hanana safidy vaovao isika - mbola tsy misy raha manoratra ity lahatsoratra ity izahay - izay azonao angatahina «Mangataka fampahalalana momba ny kaonty». Amin'izany ianao dia handefa fangatahana any amin'ny WhatsApp ary hahazo valiny ao anatin'ny telo andro farafahakeliny.
Aorian'ity indray mitoraka ity dia hahazo fampandrenesana avy amin'ny orinasa milaza aminao ianao fa efa manana ny fisieo halefa. Amin'ity tranga ity dia tokony handeha amin'ny toerana mitovy amin'ny taloha ianao Fikirana> Kaonty> Fangatahana fampahalalana momba ny kaonty ary eo no hanananao safidy hisintona ny tatitra feno. ianareo hisintona rakitra ZIP izay hisy fisie misy extension HTML sy JSON hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp dia hamela antsika hisintona kopian'ny angon-drakitra
devolo Multiroom WiFi Kit 500+, mahazoa fandrakofana internet tsara manerana ny trano
Ireo no vaovao ao amin'ny Windows 10 April Update, ny fanavaozana farany lehibe an'ny Windows